”Car daara!” – Maraykanka oo Turkiga ku qalqaalinaya inuu burburiyo gantaalaha S-400 ee uu Ruushka kasoo iibsadey | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Car daara!” – Maraykanka oo Turkiga ku qalqaalinaya inuu burburiyo gantaalaha S-400...
”Car daara!” – Maraykanka oo Turkiga ku qalqaalinaya inuu burburiyo gantaalaha S-400 ee uu Ruushka kasoo iibsadey
(Washington, DC) 26 Okt 2019 – Maraykanka ayaa sheegay in ay Turkiga ka qaadayaan cunaqabatayn ay horay u saareen kaddib markii uu soo iibsadey gantaalaha S-400, haddii aysan daarin hannaankan ay Ruushanka kasoo iibsadeen.
MW Donald Trump ayaa Arbacadii sheegay inuu qaaday cunaqabatayntii uu dalkiisu Turkiga saaray kaddib duullaankii ay ku qaadeen woqooyiga Suuriya, oo uu ka dhashay muran u dhexeeya labadan dal ee ku wada jira NATO, balse waxaan weli xallismin xiisaddii ka dhalatay iibsiga Turkiga ee S-400.
“Dabcan waxaa jira dad ku jira nidaamka Ankara oo leh, war yaan la daarin qalabkan,” ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan Wasaarad Dibadeedka Maraykanka oo magaciisa qariyay.
Waxaa warka sarkaalka ka muuqata inaan weli la shidin raadaarrada gantaalahan oo ay NATO ka cabsanayso inuu Ruushku ka faa’iido sida loosoo rido dayuuradaha NATO.
“Weli waxaa jirta howl ku saabsan inuu Turkigu iskaga dhaqaajiyo gantaalaha S-400 — ha ahaato inuu damiyo, inuu burburiyo iwm,” ayuu yiri sarkaalkan oo sheegay in ay “Turkigu khadka cas ka tillaabeen” markii ay soo iibsadeen gantaalahan, balse hadda falankeed la wado sidii xal loogu heli lahaa loogana socon lahaa.
Si kastaba, MW Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan ayaa halkiisa kasii wada inuu xiriir wanaagsan la yeesho Ruushka, oo uu haatan kula heshiiyay inuu ciidamo keeno woqooyiga Suuriya si uu u beddelo kuwii Maraykanka, taasoo uu durba ku dhaqaaqay.
Maraykanka ayaa horay Turkiga ugu diidey gantaalaha kuwan u dhigma ee Patriot, isagoo sidoo kale qaaday kuwii yaalley xuduudda Turkiga ee Suuriya/Ciraaq, taasoo keentay inuu Turkigu u weecdo dhanka Ruushka.
Previous articleTalyaaniga oo meel muhim ah ka taageeraya DF Somalia + Sawirro
Next articleJuventus oo CR7 kaddib €380m oo euro u qoondaysay saxiixa Kylian Mbappé